Fotoana izao hanidiana ny kaonty Yahoo Mail | Vaovao momba ny gadget
Na dia manohy ny diany aza ny opera savony amin'ny varotra any Verizon, ao anatin'izany ny fihenan'ny vidiny, ny bandy avy ao amin'ny Yahoo kosa dia mbola ifantohan'ny vaovao raha ny resaka fanafihana hacking, fangalarana kaonty sy ny hafa. Nandritra ny taona 2016, niaiky ny orinasa fa tamin'ny lasa, niaritra fangalarana angona tahiry tamin'ny kaonty maherin'ny 1.000 tapitrisa izy ary etsy an-daniny 500 tapitrisa, zavatra iray izay nampivadi-po ny varotra tamin'i Verizon. Fa koa voamarina fa niara-niasa tamin'ny NSA izy manolotra fidirana maimaim-poana amin'ny kaonty mpampiasa rehetra. Aza mandeha, mbola misy hafa.
Marisa Meyer, CEO an'ny YAhoo
Yahoo dia nanamafy fa mihoatra ny Kaonty 32 tapitrisa no tratry ny fanafihana hafa, izay tsy zakan'ny orinasa ara-potoana, fanafihana izay manamafy fa tsy nahavita ny hazakazaka ireo injenieran'ny fiarovana Yahoo, satria tsy mila ny teny miafina hidirana amin'ny kaonty izy ireo, fa ilay rindrambaiko ihany no ampiasain'i Yahoo mamorona cookies, mamorona cookies sandoka ary mamitaka ny rafitra amin'ny solonanarana fotsiny.
indray Tsy nitatitra mivantana an'io fanafihana vaovao io ny Yahoo, saingy nanidy ny vavany mandra-panombohana ny famoahana ny tsaho ary nifandray tamin'ny orinasa ny gazety, izay nanolotra vaovao tsy dia misy pitsopitsony ary miaraka amin'ny angon-drakitra kely izay mety hanazava ny olan'ny fandriam-pahalemana farany izay niaretan'ny orinasa tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Azo inoana fa tsy ity no zava-mahamenatra farany manodidina ny orinasa vantany vao vita ny fizotry ny varotra mankany Verizon. Verizon dia tsy te hanana olana amin'ny ho avy ary nanova ny ampahany amin'ny fifanarahana mba hahafahan'ny orinasa mitandrina ny sazy mety horaisiny avy amin'ny manampahefana amerikana izay manadihady ireo fanafihana ireo miaraka amin'ny tsy fitandreman'ny orinasa amin'ny resaka filaminana. .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Fotoana izao hanidiana ny kaonty Yahoo Mail anao
Gmail dia manitatra ny fetran'ny fampiraisana hatramin'ny 50 MB